WordPress NiceAdmin प्लगइन संस्करण १.०.० रिलिज | Martech Zone
आइतवार, अप्रिल २,, २०१। बुधबार, जुलाई 4, 2007 Douglas Karr
एक वर्ष पछि WordPress प्रशासकीय प्रयोगकर्ता ईन्टरफेसमा हेरेर, म यसको बारे थकित हुँदै बढिरहेको थिएँ। अल्पेश अर्को ब्लगमा मेरो टिप्पणी देखें र दयालुपूर्वक मलाई एक WordPress विक्रेता प्लगइन पठाईयो जुन अर्को विकासकर्ताले काम गरेको थियो। मैले वर्डप्रेस वेबसाइटबाट ग्राफिक्स प्रयोग गरेर प्लगइन परिमार्जन गरें र नयाँ प्रशासक स्टाइलशिट निर्माण गर्‍यो। यहाँ एक स्क्रीनशट छ:
यसले WordPress को उपयोगिता वा कार्यक्षमता जे बदले पनि बदल्दैन, यसले हेर्नु अलि सजिलो बनाउँदछ! आशा छ तपाईंलाई यो मनपर्‍यो!
विशेष धन्यवाद Sean मा मा बाहिर जान्छ ल्यापटपको साथ Geek। सीनको क्रस-ब्राउजरको लागि गहिरो आँखा छ CSS यसैले मैले शैलीलाई रिलीज गर्नु भन्दा पहिले फाइन-ट्यून गर्न उसको मद्दत दर्ता गरे। धन्यवाद, सीन!
प्रोजेक्ट पृष्ठबाट WordPress प्लगइन डाउनलोड गर्नुहोस्
तपाइँ सबैलाई WordPress ब्ल्गका साथ सबै मानिसहरूका लागि, म तपाईंलाई यस शब्द र मेरो अन्यलाई बाहिर निकाल्न साँच्चिकै प्रशंसा गर्दछु परियोजनाहरु। जस्तो सँधै, यदि तपाईंको ट्र्याकब्याक सूचीबद्ध छ भने, मैले खाली खोलेको छ त्यसैले तपाईं लिंकको लागि क्रेडिट पाउनुहुनेछ! धन्यवाद!
यो कीराहरूको ओल 'क्लासिक क्यान थियो
अप्रिल 8, 2007 मा 11: 38 PM
यो प्लगइनको साथ मद्दत गर्न पाउँदा मेरो खुशी थियो र चीजहरू प्रगति हुँदै जाँदा, म आवश्यक रूपमा यसमा थप काम गर्नेछु।
अप्रिल 9, 2007 मा 12: 01 एएम
यो महान प्रयोग गर्दछ यसलाई राम्रो देखिन्छ!
अप्रिल 9, 2007 मा 8: 22 एएम
अप्रिल 9, 2007 मा 1: 04 एएम
राम्रो काम डग। के हामीले यसलाई चरम वर्डप्रेस बदलाव 🙂 भनिन्छ
अप्रिल 9, 2007 मा 8: 21 एएम
चरम अर्को हुन आवश्यक छ, AL! यसले रूप र अनुभूतिलाई परिवर्तन गर्छ - तर प्रशासकसँग प्लगइनको आवश्यकता बिना स्किन र विषयवस्तुहरू हुन सक्ने दिन नजिक हुनुपर्छ!
सायद व्यवस्थापक विषयवस्तु विषयवस्तु डाइरेक्टरीमा admin.css हुनुपर्छ ताकि प्रयोगकर्ताहरूले तिनीहरूलाई सँगै प्याकेज गर्न सकून्!
अप्रिल 9, 2007 मा 8: 04 एएम
त्यहाँ राम्रो काम डग .. साँच्चै, म एउटै प्रशासक प्यानल बारम्बार देखेर मर्न दिक्क भएँ।
सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यसले केवल शैली परिमार्जन गर्दा प्रकार्यहरू राख्छ।। मलाई के चाहिन्छ। 😀
अप्रिल 9, 2007 मा 8: 19 एएम
अप्रिल 9, 2007 मा 8: 53 एएम
नयाँ स्क्रिनहरू मन पराउनुहोस्। यद्यपि एउटा समस्या भेटियो। प्रस्तुति/विषय सम्पादक स्क्रिन सही छैन। कोड विन्डो प्रयोग गर्न धेरै सानो छ। यो थम्बनेल जस्तो सानो छ।
अप्रिल 9, 2007 मा 12: 02 PM
के तपाइँ मलाई स्क्रिनसट पठाउन सक्नुहुन्छ र तपाइँ कुन OS/ब्राउजर चलाइरहनु भएको छ?
अप्रिल 9, 2007 मा 5: 30 PM
तपाईंलाई स्क्रिनसट पठाउनेछ। Xphome 5.1.2600 सेवा प्याक2बिल्ड 2600 र IE7प्रयोग गर्दै।
मैले स्क्रिनडम्पको pdf फाइल बनाएको छु। यदि मैले तपाईको इमेल एड्डर फेला पार्न सक्छु भने तपाईलाई संलग्न पठाउनेछु।
अप्रिल 9, 2007 मा 6: 38 PM
यो साँच्चै बेकार मुद्दा हो! यस्तो देखिन्छ कि फन्ट साइज 1 वा2px साइजमा गएको छ। मैले यसलाई css मा ओभरराइड गर्दा पनि, मैले सही नतिजाहरू पाइरहेको छैन। अरे, IE!!!
(PS: फायरफक्स जानुहोस्!) 🙂
अप्रिल 9, 2007 मा 8: 55 PM
सत्य थाहा छ, म जे भए पनि फाइलहरू सम्पादन गर्न त्यो स्क्रिन प्रयोग गर्दिन। म यसलाई स्थानीय रूपमा गर्छु त्यसपछि यसलाई ftp गर्छु। तर मैले तपाईंलाई यसको बारेमा जानकारी दिन बाध्य महसुस गरें।
स्क्रिनडम्प यहाँ फेला पार्न सकिन्छ:
अप्रिल 9, 2007 मा 7: 37 PM
यो राम्रो छ। मैले अन्य विकासकर्ताले के गरेको देखेको छैन, तर यो राम्रो छ।
उल्लेख को लागी धन्यवाद 🙂
अप्रिल 9, 2007 मा 9: 43 PM
मलाई यो विषयवस्तु मेनु मनपर्छ, धेरै व्यावसायिक। म यसलाई मेरो सबै 8 ब्लगहरूमा स्थापना गर्दैछु, र यसलाई मेरो ब्लग ग्राहकहरूको लागि मानक प्लगइन बनाउँदैछु।
म्याट @ Inlet Host.com
अप्रिल 14, 2007 मा 1: 30 एएम
रोसले भनेजस्तै, म पनि IE7+WinXPSP2 सँग उही समस्याको अनुभव गर्दैछु।
मोजिला ठिक छ।
अप्रिल 14, 2007 मा 5: 48 PM
यो धेरै पुरानो जस्तै देखिन्छ। तपाईंले टेम्प्लेटलाई थप उपयोगी बनाउन के परिवर्तन गर्नुभयो? त्यहाँ कुनै विशेष वस्तु थियो जुन परिवर्तनको लागि उत्प्रेरक थियो?
अप्रिल 14, 2007 मा 6: 11 PM
परिवर्तनहरू सबै सौन्दर्य हुन्, थोर। फन्ट र शैलीहरू आँखामा थोरै सजिलो छन्। म इन्टर चीजलाई पुन: लेख्नमा छुरा लिन चाहन्छु तर समय मेरो पक्षमा छैन। 🙂
अप्रिल 27, 2007 मा 11: 44 PM
के त्यहाँ छिट्टै आईईसी को लागी एक समाधान हुनेछ? थिम-सम्पादक बक्स यति सानो छ।
अक्टोबर 6, 2007 बिहान 7:08 बजे
WordPress 2.3 को लागी एक सानो फिक्स थपियो।
जनवरी 12, 2008 9:12 बजे
अप्रिलमा पछाडिबाट यी टिप्पणीहरू देखे, मलाई लाग्छ कि मैले सम्पादन कोटीहरूको साथ उही "थम्बनेल" साइज मुद्दा फेला पारे ...